Weerar dhimasho iyo dhaawac geystay oo ka dhacay duleedka Dhuusamareeb – XAMAR POST
Weerar dhimasho iyo dhaawac geystay oo ka dhacay duleedka Dhuusamareeb
Waxaa faah-faahino laga helayaa dagaal geystay khasaaro iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo xalay ka dhacay deegaanka Balibiri oo duleedka Waqooyi kaga beegan Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimada DG Galmudug.
Dagaalkaan ayaa la sheegay in uu dhaxeeyay Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya iyo koox hubeysan oo la aamin san yahay in ay ka tirsan yihiin Ururka Ahlusunna.
Warar kale duwan ayaa kasoo baxaya sida uu ku yimid dagaalka, balse waxaa la sheegay in dagaalamayaal ka tirsan Ururka Ahlu sunna ay weerar dhaba gal ah ku qaadeen Ciidamo ka tirsan dowladda, kuwaas oo watay gaadiidka dagaalka islamarkaana ka baxay Xarunta Madaxtooyadda ee Dhuusamareeb.
Sidoo kale, warar ayaa sheegaya in Ciidamada dowladda ee ka baxay Madaxtooyada ay doonayeen Askar la soo xiriirtay oo sheegay in dhanka Ururka Ahlusunna kasoo goosteen hase-ahaatee uu isku badalay Weerar dhabo gal ah kaas oo ka dhacay deegaanka Balibiri oo dhanka duleedka ka ah Magaalada Dhuusamareeb.
Hirshabeello oo shaacisay Jadwalka Doorashada 4 kursi